“कार्यकर्ता असल छन्, नेतामा हठ छ”
Thursday, 06.22.2017, 12:17pm (GMT5.5)
काठमाडौं । मुलुकमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा अस्ति आइतबार मनोनयन सकियो । मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउन भन्दै सरकारले प्रदेश दुईमा निर्वाचन स्थगित गरे पनि उनीहरू निर्वाचनमा आएका छैनन् । निर्वाचन बिथोल्न भन्दै गतिविधि गरिरहेका छन् । यस्तोमा मधेशवादी गठबन्धनमै रहेको तर वैशाख ३१ गतेयता निर्वाचनमा भाग लिइरहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने राजपा नेपालले चुनाव भाँड्ने हुति आफूले नदेखेको दाबी गर्नुभएको छ । यादवले निर्वाचनमा भाग नलिएर राजपाले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हानेको टिप्पणी गर्दै आफूले मधेशको समग्र हितको लागि काम गरेको दावी समेत गर्नुभएको छ । उहाँले चुनावलाई आफूहरूले उपयोगको रुपमा लिएको र चुनावलगत्तै शक्ति सञ्चय गरेर संविधान संशोधनको लागि लड्ने समेत बताउनुभयो ।
आइतबार सम्पन्न मनोनयनमा फोरमले सबै जिल्लामा उम्मेदवारी दिएको छ । अनि कतिपय ठाउँमा सत्तापक्षसंग र विपक्षी दलसंग तालमेल समेत गरेको छ । उसले नयाँ शक्ति, माओवादी केन्द्रसँग र पहाडमा काँग्रेससँग कहीँ कहीँ तालमेल गरेकोे छ । यादव अहिले राजपाले गरिरहेको गतिविधिप्रति आक्रोशित हुनुहुन्छ । उहाँ २० बर्षपछि जनताले स्थानीय सरकार पाउँदै गरेको र माहोल उत्साहपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।
हुन त यादव र राजपाबीच ठाउँठाउँमा झडप भएको छ । राजपाका नेताहरू यादवमाथि खनिएका छन् । तर, यादवको उत्तर छ– यो संविधानले मुलुक अघि बढ्दैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन छ । नेताहरू प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिने तर जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने मौका अवसरबाट बञ्चित गराउने ? यो कहाँको लोकतन्त्र हो ? जनतालाई लात हान्न पाइन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
यादवको तर्क छ– हाम्रा माग हिजो पनि पुरा भएका थिएनन्, आज पनि भएका छैनन् । हामीले जति प्राप्त गरेका छौँ । त्यति नै लिएर जनताको बीचमा जाने हो । बाँकी अधिकारको लागि लड्दै जाने हो । अधिकारको नाममा घटिया राजनीति गर्ने, फोहोरी खेल खेल्ने, फोरमको कार्यालय जलाउने काम कहाँको राजनीति हो । त्यस्तै यादव भन्नुहुन्छ– “आज दुई नम्बर प्रदेश र जनतालाई पछिपार्ने काम उहाँहरूबाट भएको छ । जनप्रतिनिधिविहीन गराइएको छ । दुई तीन महिनापछि निर्वाचन गर्नु भनेको दुई नम्बर प्रदेशलाई पछि पार्नु हो । यही हो उहाँहरूको उपलब्धि ?
सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारे गल्ती गरेको भन्दै आक्रोशित यादव निर्वाचन सारेर गर्न नहुने काम सरकारले गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँको तर्क छ– मधेशी जनताको गलामा फन्दा हाल्ने काम भएको छ । यसले देशको पनि हित हुँदैन । दुई नम्बरको त झनै हुँदैन । असोजमा पुर्याइएको छ, यो कार्य देशको हितमा र मधेशको हितमा पनि छैन् ।
निर्वाचनले मधेशी जनताले शक्ति पाउँछन् । अधिकार पाउँछन् । अब यो चुनाव सकिएपछि फेरि लड्ने हो । सशक्तिकरण जनतामा गराएर अनि आफ्नो शक्ति आर्जन गरेर जनताका विकास निर्माणका कार्यहरू सँगै अघि बढाउँदै आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने हो । संविधान संशोधन लगायतका थुप्रै एजेण्डाहरू छन् । जस्तो, भ्रष्टाचारका विषयहरू छन् । प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने एजेण्डा छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने एजेण्डा छन् । यी सबलाई चुनावपछि उठाउने हो ।
चुनावमा भाग नलिएर राजपाले ठूलो गल्ती गरेको बताउने यादव उनीहरूमाा निर्वाचन विथोल्ने हुती नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँको तर्क छ– “राजपा नेपालले गर्ने भनेको फोरम नेपालको बोर्ड हटाउने मात्रै हो । अनि हिलो छ्याप्ने मात्रै हो । उनीहरूले गर्नसक्ने भनेको त्यति मात्रै हो ।
जनताले चुनाव चाहेका छन् । राजपा नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई एकाविहानै भेट्नुभएको छ । उहाँहरूले देउवाजीसँग ‘फेस सेभिङको लागि मात्रै आन्दोलन गरेको’ भनेर भनेछन् । यो के हो ? उहाँको टिप्पणी छ– “राजपाका कार्यकर्ताहरू असल छन् । केही नेताहरूमा हठ छ ।”